Namoaka fanavaozana vaovao momba ny COVID ny lehiben'ny mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka Canada
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Namoaka fanavaozana vaovao momba ny COVID ny lehiben'ny mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka Canada
Ny areti-mifindra COVID-19 dia mitohy miteraka adin-tsaina sy tebiteby ho an'ny Kanadiana maro, indrindra ireo izay tsy manana fahafahana miditra amin'ny tambajotra fanohanana mahazatra. Amin'ny alàlan'ny vavahadin-tserasera Wellness Together Canada, afaka miditra mivantana amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy fampiasana zava-mahadomelina ny olona avy amin'ny sokajin-taona rehetra manerana ny firenena, 24 ora isan'andro, fito andro isan-kerinandro. Izao no nambaran'ny Lehiben'ny Fahasalamam-bahoaka androany:
Ny masoivoho momba ny fahasalamam-bahoaka any Canada (PHAC) dia manohy manara-maso ireo tondro areti-mifindra COVID-19 mba hamantarana haingana, hahatakatra ary hampita ireo olana mipoitra mampanahy. Androany dia nanolotra fanavaozana momba ny epidemiolojia nasionaly sy ny modeling aho. Ity manaraka ity dia famintinana fohifohy momba ny vokatra modely sy ny isa ary ny fironana nasionaly farany.
Ny vinavinan'ny maodely lavitr'ezaka nohavaozina androany dia milaza fa ny onja fahefatra dia mety hihena amin'ny herinandro ho avy raha tsy mitombo ny fampitana. Miaraka amin'ny fanjakazakan'ny variana Delta be areti-mifindra, ny vinavina lavitra dia mbola manamafy ny maha-zava-dehibe sy ny fiantraikan'ny fepetra momba ny fahasalamam-bahoaka sy ny fitandremana manokana, na dia amin'ny ambaratongan'ny fandrakofana vaksiny ankehitriny aza. Na dia manohy mahita famantarana tsara aza isika, dia mety hanomboka hiakatra indray ny tranga miaraka amin'ny fitomboan'ny fifindran'ny tsotsotra. Midika izany fa mety mbola hisy ny fikorontanana amin'ny lalan-tsika COVID-19 ary mety hitondra fanamby fanampiny ny volana ririnina rehefa miverina indray ny areti-pisefoana hafa, saingy fantatsika fa ny fomba fanao tsirairay dia miasa mba hampihenana ny otrikaretina sy hiarovana amin'ny voka-dratsin'ny COVID-19 satria ary koa ny aretina hafa amin'ny taovam-pisefoana.
Hatramin'ny nanombohan'ny areti-mifindra dia 1,725,151 ny trangan'ny COVID-19 ary 29,115 no maty tany Canada. Ireo isa mitambatra ireo dia milaza amintsika momba ny enta-mavesatry ny aretina COVID-19 amin'izao fotoana izao, raha ny isan'ny tranga mavitrika, izay 23,162 ankehitriny, ary ny salan'isa mihetsika 7 andro dia manondro ny fihanaky ny aretina ankehitriny sy ny firongatry ny fahasarotana.
Eo amin'ny firenena dia mitohy mihena ny asan'ny aretina COVID-19, izay misy tranga vaovao 2,231 eo ho eo voalaza isan'andro mandritra ny 7 andro farany (29 oktobra-4 novambra), fihenan'ny 5% raha oharina tamin'ny herinandro teo. Ny fironana amin'ny fidirana amin'ny hopitaly sy ny fitsaboana manara-penitra, indrindra amin'ny olona tsy vita vaksiny, dia mihena eo amin'ny firenena saingy mijanona ho ambony. Ny angon-drakitra farany momba ny faritany sy faritany dia mampiseho fa olona 1,934 eo ho eo amin'ny COVID-19 no tsaboina any amin'ny hopitaly kanadiana isan'andro nandritra ny fe-potoana 7 andro farany (29 oktobra-4 novambra), izay 8% ambany noho ny herinandro lasa. Tafiditra ao anatin'izany, amin'ny salanisa, olona 595 no notsaboina tao amin'ny sampana fikarakarana fatratra (ICU), 8% latsaky ny herinandro lasa teo ary salan'isa 27 no maty isan'andro (29 oktobra-4 novambra). Miaraka amin'ny fijanonan'ny hopitaly maharitra, ireo isa mbola avo ireo dia mbola miteraka vesatra mafy amin'ny loharanon-pahasalamana eo an-toerana, indrindra raha avo ny tahan'ny otrikaretina ary ambany ny tahan'ny vaksiny.
Nandritra ity onja fahefatra amin'ny areti-mifindra COVID-19 any Canada ity, ny areti-mifindra sy ny voka-dratsiny dia manana endri-javatra lehibe maromaro:
• Eo amin'ny firenena, ny Delta Variant of Concern (VOC) tena areti-mifindra, no mahatonga ny ankamaroan'ny tranga voalaza tato ho ato, mifandray amin'ny fitomboan'ny fahasarotana, ary mety hampihena ny fahombiazan'ny vaksiny.
• Ny ankamaroan'ny tranga voalaza, ny hopitaly sy ny fahafatesana dia mitranga eo amin'ireo olona tsy vita vaksiny
• Ny fiparitahan'ny viriosy any amin'ny faritra ambany saro-piaro ny vaksiny dia miteraka risika mitohy amin'ny firongatry sy fanoloana VOC vaovao, ao anatin'izany ny loza ateraky ny VOC izay afaka misoroka ny fiarovana ny vaksiny.
Na inona na inona karazana SARS-CoV-2 manjaka ao amin'ny faritra iray, dia fantatsika fa ny vaksiny, miaraka amin'ny fepetra momba ny fahasalamam-bahoaka sy ny fomba fanao tsirairay, dia manohy miasa mba hampihenana ny fihanaky ny aretina sy ny voka-dratsiny. Amin'ny ankapobeny, ny porofo dia manohy mampiseho fa ny andiany roa feno amin'ny vaksiny COVID-19 nankatoavin'ny Health-Canada dia manome fiarovana lehibe amin'ny aretina mafy, indrindra amin'ny sokajin-taona tanora. Miorina amin'ny angona farany avy amin'ny faritany sy faritany 12 ho an'ny mponina mendrika, 12 taona na mihoatra, tato anatin'ny herinandro vitsivitsy (19 septambra - 16 Oktobra 2021) sy ny fanitsiana ny taona, ny tahan'ny salan'isa isan-kerinandro dia manondro fa ny olona tsy vita vaksiny dia mety ho voan'ny aretina. naiditra hopitaly niaraka tamin'ny COVID-19 raha oharina amin'ny olona vita vaksiny tanteraka.
• Amin'ny tanora sy ny olon-dehibe 12 ka hatramin'ny 59 taona, ny olona tsy voan'ny vaksiny dia 51 heny noho ny olona vita vaksiny tanteraka.
• Amin'ireo olon-dehibe efa lehibe 60 taona no ho miakatra, ny olona tsy vita vaksiny dia 19 heny noho ny olona vita vaksiny tanteraka.
Tamin'ny 4 Novambra 2021, ny faritany sy faritany dia nanome vaksiny COVID-58 mihoatra ny 19 tapitrisa, miaraka amin'ny angon-drakitra farany momba ny faritany sy faritany milaza fa maherin'ny 89% amin'ny olona 12 taona no ho miakatra no nahazo fatra COVID-19, fara fahakeliny. Vaksiny 84 ary mihoatra ny 30% no vita vaksiny tanteraka. Ny angon-drakitra momba ny vaksiny manokana amin'ny taona, hatramin'ny 2021 Oktobra 88, dia mampiseho fa maherin'ny 40% amin'ny olona 84 taona na mihoatra no manana fatra iray farafahakeliny ary mihoatra ny 84% no vita vaksiny tanteraka, raha 85-18% amin'ny olon-dehibe tanora 39-80 taona. taona manana fatra iray farafahakeliny ary latsaky ny XNUMX% no vita vaksiny tanteraka.
Satria betsaka ny hetsika ataontsika ao an-trano, amin'ity fararano sy ririnina ity, dia tsy maintsy miezaka isika mba hanao vaksiny tanteraka amin'ny COVID-19 faran'izay haingana araka izay azo atao mba hiarovana ny tenantsika sy ny hafa, anisan'izany ireo izay mety tsy manana hery fiarovana mahery vaika. na izay tsy afaka manao vaksiny. Ny fampiharana ny fepetra ara-pahasalamana ho an'ny daholobe ary ny fitazonana ny fomba fiarovana ny tsirairay dia ho zava-dehibe amin'ny fampihenana ny tahan'ny fihanaky ny COVID-19 sy ny fampihenana ny fiantraikany amin'ny fahaiza-manao ara-pahasalamana. Na dia notohanan'ny vaksiny aza ny fiarovana antsika amin'ny COVID-19, dia mila mieritreritra ny fiverenan'ny areti-pisefoana hafa koa isika. Afaka mijanona ho salama kokoa isika amin'ny alàlan'ny fanavaozam-baovao amin'ny vaksiny atolotra, toy ny gripa sy ny vaksiny mahazatra hafa ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe ary ny fitandremana ny fitandremana fototra izay manampy amin'ny fampihenana ny fihanaky ny COVID-19 sy ny areti-pisefoana hafa.
Raha mbola miparitaka any Canada sy iraisam-pirenena ny COVID-19, dia mijanona ho zava-dehibe ny fanao ara-pahasalamam-bahoaka: mijanona ao an-trano / mitokantokana raha misy soritr'aretina; fantaro ny loza mety hitranga amin'ny toe-javatra samihafa; araho ny torohevitry ny fahasalamam-bahoaka eo an-toerana ary tazony ny fomba fiarovana manokana. Indrindra indrindra, ny fanalavirana ara-batana sy ny fanaovana saron-tava mirindra tsara sy vita tsara dia manome sosona fiarovana fanampiny izay mampihena bebe kokoa ny loza mety hitranga aminao amin'ny toe-javatra rehetra, ary koa ny fahazoana rivotra tsara indrindra amin'ny toerana anatiny.